Gbasara anyị - Beijing Zohonice Mma Equipment Co., Ltd.
Kemgbe afọ 2008, anyị abụrụla ọkachamara na teknụzụ ọkachamara maka salons, spa, ụlọ ọgwụ na omume.
Ebumnuche anyị lekwasịrị anya n'ịnapụta ndị ahịa na iche echiche usoro ọgwụgwọ ọhụụ jikọtara ya na ọkwa ọrụ na-enweghị atụ na nkwado azụmaahịa na-aga n'ihu ahụla ka otu anyị na-etolite ngwa ngwa n'ime ndị isi ụlọ ọrụ - ịtọ ntọala maka ihe ga-ekwe omume n'ọhịa na-ebuwanye ibu nke aesthetics. Ugbu a, anyị na-enye teknụzụ ọgwụgwọ na-enweghị isi na nkwado nkwado azụmaahịa karịa ndị ahịa 2,000 gafere China.
Anyị na-esi ọnwụ na-amalite site ahịa mkpa, -anọgide na-enye magburu onwe ngwaahịa nhọrọ nkwanye ọrụ, na-ere ụlọ ọrụ na-eduga-onu ngwaahịa, na ike kacha uru maka ndị ahịa. Ahịa afọ ojuju bụ ọrụ anyị echiche.
Ndị otu anyị nwere ihe karịrị 30 ndị ọkachamara n'ihe banyere teknụzụ gụnyere ndị injinia ruru eru, ndị ahịa, ndị na-ahụ maka teknụzụ, ndị nkuzi, nlekọta ndị ahịa, lọjistik, ego, njikwa na ndị ọrụ nchịkwa. Site na netwọkụ a dị nso, anyị na-akwadebe azụmaahịa mara mma nke nha na nka dị iche iche iji nweta ogo kachasị mma na ogo ahụike nke ngwa ọrụ aesthetic - niile nyochara nke ọma site na ndị ọhụụ kachasị mma n'ụwa na teknụzụ dị elu maka ụlọ ịhịa aka gị, spa, ụlọ ọgwụ na omume.
N'ezie, ndị otu anyị si mba ọzọ na-azụ ahịa nwere otu ụmụ akwụkwọ kọleji na-eto eto hụrụ ụlọ ọrụ mara mma n'anya. Ha maara nke ọma na Bekee, Spanish, German, French, na Arabic, na-enyekwa ozi ụlọ ọrụ na-ezi oge na nke ziri ezi, mmeghe ngwaahịa na arụmọrụ maka ndị ahịa gburugburu ụwa. Nduzi, ntugharia ire ahia na oru nkwado ndi ozo.
Anyị bụ ndị mbụ technology na-eweta mgbe ọ na-abịa:
>> IPL ntutu mwepụ igwe
>> Igwe nchapu ntutu 808nm diode laser
>> Cryolipolysis kefriza igwe slimming
>> IPL Laser RF Multifunction akụrụngwa
>> CO2 laser mma akụrụngwa
>> Ikanam PDT akpụkpọ rejuvenation
>> IPL YAG laser Mapụtara akụkụ
>> Nd: Yag Laser Tattoo mwepụ Machine
>> Home Jiri Obere Mma Mma
>> Ihu-eweli Skin Rejuvenation igwe
>> Ezé whitening
>> Igwe Ntutu Laser
anyị na-eme ka ndị mmadụ maa mma .wonderful .comforable.
Ọhụụ nke Successga nke Ọma
"Zohonice Mma Equipment Co.LTD" a ga-ahuta site na salonlọ Mmanya, spa, ụlọọgwụ na Pratics Owners dị ka na-eduga ejiji na Mara mma gbara akwụkwọ na Mepụta ebube highlife ịke ..
Pụrụ ịdabere uru ike ọmịiko, Innovative, Nsọpụrụ, na-akwado Commercial, Fun.